တရုတ်နိုင်ငံ က ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံတွင် ပထမဆုံး စွန့်ပစ်ပစ္စည်းမှ စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်ရေးစီမံကိန်းကိုအကောင်အထည်ဖော် - Xinhua News Agency
ဒါကာ ၊ ဒီဇင်ဘာ ၃ ရက် (ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံမှ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုသည် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံတွင် အမှိုက်မှစွမ်းအင် ထုတ်ယူခြင်းဆိုင်ရာ စီမံကိန်း လေးခုကို ဒီဇင်ဘာ ၁ ရက်နေ့က သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။
သဘောတူညီချက်များအရ China Machinery Engineering Corporation (CMEC) သည် မြို့တော်ဒါကာ၏ဆင်ခြေဖုံးဒေသဖြစ်သည့် အမ်မီဘာဇားတွင် အမှိုက်မှစွမ်းအင်ထုတ်လုပ်နိုင်သည့် ၄၂.၅ မဂ္ဂါဝပ်ရှိသော ဓာတ်အားပေးစက်ရုံကို တည်ထောင်မည်ဖြစ်သည်။
လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲအခမ်းအနားသို့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးများ၊ တာဝန်ရှိသူများနှင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဆိုင်ရာ တရုတ်သံအမတ်ကြီး လီကျိမင် တို့ တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသည် ဒါကာမြို့တွင် စွန့်ပစ်အမှိုက်များမှ စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်ခြင်းဆိုင်ရာ စီမံကိန်းကို အကောင်အထည်ဖော်ရန် ကာလရှည်ကြာ လုပ်ဆောင်နေခဲ့သည်။
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံ ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး AHM Mustafa Kamal ဦးဆောင်သော ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံ၏ ကုန်ပစ္စည်းများဝယ်ယူရေးဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးများအဖွဲ့သည် ထိုစီမံကိန်းကို အကောင်အထည်ဖော်မည့် CMEC နှင့် သက်တမ်း ၂၅ နှစ်ရှိသော သဘောတူစာချုပ်တစ်ခုအား ပြီးခဲ့သည့်နှစ် နိုဝင်ဘာလက ကျင်းပခဲ့သောအစည်းအဝေးတစ်ခု၌ အတည်ပြုခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
စီမံကိန်းစာရွက်စာတမ်းများအရ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများမှ စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်နိုင်မှုမှာ ၄၂.၅ မဂ္ဂါဝပ်ရှိပြီး မြို့တော်ဧရိယာမှ နေ့စဉ် သိမ်းဆည်းရရှိနိုင်မည့် အမှိုက်တန်ချိန် ၃၀၀၀ ခန့် မှ လျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်မည်ဟု သိရသည်။
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံ လျှပ်စစ်၊ စွမ်းအင်နှင့် သတ္တုအရင်းအမြစ်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီး Nasrul Hamid က စီမံကိန်းအားအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရန်လျှောက်ထားသည့် လုပ်ငန်း ၁၇ ခု ကြားမှ စီမံကိန်း ၌ နည်းပညာပိုင်းနှင့် ငွေကြေးအရလိုက်လျောညီထွေရှိသည့် တရုတ်နိုင်ငံ၏လုပ်ငန်းအား ရွေးချယ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
ကနဦးဆောင်ရွက်မှုတွင် အမှိုက်ပမာဏ သုံးပုံတစ်ပုံအထိ လျော့ကျသွားမည်ဖြစ်သည့်အတွက် ဤစီမံကိန်းသည် အမှိုက်စွန့်ပစ်ခြင်းကို လျှော့ချရန်နှင့် ဒါကာမြို့နှင့် ၎င်း၏ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးကို သန့်ရှင်းစေရန် အထောက်အကူဖြစ်နိုင်ကြောင်း တာဝန်ရှိသူများက ပြောကြားခဲ့သည်။
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ဒေသန္တရအစိုးရနှင့် ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဝန်ကြီး Tazul Islam က “ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် (ဒါကာမှာ) ဘယ်နေရာမှာမှ အမှိုက်တွေ ကျန်တော့မှာ မဟုတ်ဘူးလို့ ယုံကြည်ပါတယ်” ဟု ဆိုသည်။
ယင်းစီမံကိန်းသည် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နှင့် တရုတ်နိုင်ငံအစိုးရနှစ်ရပ်စလုံးအတွက် အလွန်အရေးကြီးကြောင်း သံအမတ်ကြီး လီ က ၎င်း၏မိန့်ခွန်းတွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
လျှပ်စစ်ဓာတ်အား တိုးမြှင့်ထုတ်လုပ်ရန် ကြိုးပမ်းနေကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ သိပါသည်၊၊
“ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် အစိုးရဟာ လျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်မှုကိုတိုးမြှင့်နိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းလျက်ရှိပြီး ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲ နှင့် သန့်ရှင်းသော စွမ်းအင်ရရှိအောင် ရည်ရွယ်နေတယ်ဆိုတာ မိမိတို့အနေနဲ့ သိရှိပါကြောင်း” လီက ဆိုသည်။
“နောက်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံကလည်း အစိမ်းရောင်နဲ့ ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုနည်းတဲ့ စီးပွားရေးအသွင်ကူးပြောင်းမှုကို အရှိန်မြှင့်တင်လုပ်ဆောင်ဖို့ ကတိပြုထားပါတယ်” ဟု ၎င်းကဆိုသည်။ (Xinhua)
DHAKA, Dec. 1 (Xinhua) — A Chinese firm signed four project investment agreements onawaste-to-energy project with its Bangladeshi partners here on Wednesday.
According to the agreements, China Machinery Engineering Corporation (CMEC) will set upa42.5-megawatt waste-to-energy power plant at Aminbazar on the outskirts of capital Dhaka.
Several Bangladeshi ministers, officials and Chinese Ambassador to Bangladesh Li Jiming attended the signing ceremony.
Bangladesh has long been pursuingawaste-to-energy project to ensure proper municipal waste management in Dhaka.
Bangladesh’s Cabinet Committee on Purchase, headed by Finance Minister AHM Mustafa Kamal, inameeting in November last year approveda25-year deal with CMEC, which will implement the project.
According toaproject document, the waste to energy power plant hasacapacity of 42.5 megawatts and processes around 3,000 tonnes of fresh waste per day collected from the capital area.
Bangladeshi State Minister for Power, Energy and Mineral Resources Nasrul Hamid said they selected the Chinese firm among 17 candidates as they found it to be technically and financially viable for this project.
As waste volume will decrease to one-third due to the initiative, officials said this project will help them reduce open disposal of waste and keep the Dhaka city and its overall environment cleaner.
“I believe Bangladesh will see that waste is no more remaining anywhere else (in Dhaka),” said Tazul Islam, Bangladeshi minister for Local Government and Rural Development.
In his speech, Ambassador Li said the project has great importance to both the Bangladeshi and Chinese governments.
“…we know the government of Bangladesh is endeavoring to increase electricity production while aiming to source renewable and clean energy,” he said.
“And China is committed to accelerating its transition toagreen and low carbon economy as well.” Enditem